Amadoda amaninzi kunye nomfazi omnye
Kuthekani ukuba udibana namadoda amaninzi ngexesha elinye? Yaye indlela yokukhetha enye yazo, awukwazi ukucinga. Ngomnye uqhagamshelwe ngobudlelwane bokomoya, ungathetha iiyure malunga nento yonke ehlabathini, enye inomthandi obalaseleyo, kwaye okwesithathu uzalise izipho ezibizayo kunye nezithembiso zokuzithumela eMaldives. Indlela yokwenza okulungileyo kwaye ungenzi iphutha?
Xa udibana namadoda amaninzi ngelo xesha, kukunika ithuba lokukhetha okulungileyo kubo, lowo uya kukhululeka kuyo yonke indlela. Kwaye, ke, iirekhodi eziningana ngexesha elifanayo zineenzuzo.
Inyaniso yokuba amadoda amaninzi akunyamekela ngexesha elinye liphakamisa ukuzithemba. Umqondo wokuzixabisa kunye neentlanzi kwiimbhakabhaka! Emva kwakho konke, iimfanelo zakho zaphawulwa ngabameli abaningana besondo esomeleleyo.
Ubomi bakho bubukeka njengomsebenzi oqhumayo. Iholide imihla ngemihla! Imiboniso yokutyelela, imicimbi ehlukahlukeneyo, iiklabhu, iivenkile, ukuhamba kwelizwe, abahlobo abatsha - awunawo umzuzu woxolo.
Izipho. Yonke intombazana iyavuya xa kunikwa izipho ezincinane, okanye zinikwe izipho ezibalulekileyo. Abaphathi abambalwa ngexesha elifanayo baya kukunika amaxesha amaninzi amnandi kunye nezinto eziliqela.
Nsuku zonke utsha. Ngomnye udlala intombazana eyenziwe ngokwakho, kunye nomnye umela i-libertine enomdla, kunye neyesithathu ukhulula kwaye ube nguwe. Ukwabelana ngesondo ehlukeneyo kuwe! Yaye ungamceli umntu ukuba abe nomnene kunye nothando, ukuba uyilwanyana yasendle. Uyazi ukuba ngomso uya kugxininiswa ngumthandi ophazamisayo kwaye onomdla.
Intloko iyajikeleza kwiifowuni kunye neesms. Awukwazi ukulahleka kumadoda akho, njani ukwenza yonke into?
Khetha umhlobo ogqwesileyo oza kuqonda iziganeko zakho. Ngoko unokukunceda: khupha, ncedise kwaye ucebise indlela engcono yokuyenza.
Qiniseka ukuba uthole idayari apho uya kubhala iintlanganiso, iimpawu zomntu, izipho zakhe, amagama abahlobo bakhe. Ngokubanzi, ulwazi onokulufuna. Ukufihla nje "ubungqina obuncitshisiweyo" buya kuba luhle kakhulu. Khawucinge nje oko kuya kwenzeka ntoni xa kukho enye yeekhathane zakho?
Ukuba udibana nomnye umqhubi, kwaye omnye umema ukuba usebenzise ukuhlwa kunye naye, ungabizi naluphi na uhlobo idilesi ye-salon okanye iindidi ezenzayo "oya kuzo." Kuthekani ukuba ufuna ukudibana nawe nge-roses?
Cima zonke iifowuni kwifowuni, kwikhomputha kunye nazo zonke ezo ndawo apho inkwenkwe iyakwazi ukubona impawu "yegeyimu engalunganga". Amagama abalandeli kwifowuni babhale amagama abantu! Hayi "amnandi", "amabhinki" namagama amabhinqa! Oku kuya kuvela kwixesha elingenakwenzeka. Ebusuku, ifowuni kufuneka ifakwe.
Enye into yokuba ungene kuyo. Xa udibana nomfana omtsha, ungahambi ngqo kuhlamba. Oku kunokumnceda. Yaye ukuba uhlola i-panties yakho, apho kusekho umtsalane odlulileyo? Gqoka unyawo olumanzi nawe kwaye uthathe njengomgaqo wokuzibeka ngokufanelekileyo emva kwesondo.
Inkqubo engunaphakade. Ekhanda lakho, kufuneka uhlale unolwazi oluninzi: amagama, indawo zeentlanganiso, izipho, apho ubusuku kunye nabanye abaninzi. Musa ukubiza igama lomnye umntu ebhedini! Yinto enye xa kukho abathandi ababini, kwaye ukuba ngaphezulu?
Khumbula ukuba kweso sixeko esikhulu kunazo zonke apho amadoda akho athandekayo angakwazi ukudibanisa ngethuba. Umhlangano ongalindelekanga unokubangela ukuba ngamnye wabo aqale ukubonisa intombazana entsha, ohlala kuzo zombini iimeko!
Musa ukuwulibala iintshaba zakho, abahlobo abakubonayo kwinkampani kunye nesinye isithandwa. Bangakwazi ukungena ngephutha (kwaye mhlawumbi ngokuthe ngqo) "khupha" into enje, emva koko kufuneka uqikelele kwaye uchaze ukuba ngubani na kuwe ngaloo busuku.
Umfazi odibana namadoda amaninzi ngexesha elinye, kuba abaninzi basala "ukunyelisa ngokuziphatha okubi." Le yenzelwe amadoda ukuba axolele. Ungumfazi, uthathe ntoni kuye? Kwaye sinokuthiwa igama elibi kunokuba "ukuhamba."
Mhlawumbi i-drawback enkulu, ukuba kukho iindibano eziliqela ngexesha elifanayo, ziya kuba yedwa ngokomoya. Nangona ubomi obutyebi, nguwe wedwa kwaye unentliziyo inentetho ngaphandle kwentetho. Udlala enye indima kwaye uloyiko lokudibanisa amagama.
Kwaye into yokugqibela "unokuyidla" kukuhlushwa kwesazela. Ukubona amehlo omntu wothando, ukuhlonipha kwakhe kunye nawe, kunye nokumkhohlisa nabanye, uyakwazi kuphela intombazana enentliziyo engenakho intliziyo. Ngenye imini yonke into iyavula kwaye iqabane lakho liza kuba lusizi kakhulu.
Njengomgaqo, ixesha leenveveli zangexesha elifanayo liwela ebusheni, kodwa kunokwenzeka ukuba intombi ekhulile ingaziphatha ngendlela efanayo. Nangona kunjalo, kungekudala okanye kamva, kuya kufuneka ukhethe enye. Mamela intliziyo yakho! Kuya kukuxelela ngubani kuphela wakho ...
Iimpazamo eziqhelekileyo ezenziwa ngabasetyhini ngomhla wokuqala
Intsingiselo yombala weenwele ebomini
Isabelomali seentsapho - ngubani oyalela umculo?
Unyango lwexesha lokuyeka umyeni kunye neendlela zomntu
Ukuhlanzeka nokucoceka, unokuziva!
Isobho semifuno eneepare
Umdlali ongumdumikazi uSalma Hayek
Ngamanzi amancedo kumzimba womntu
I-French manicure, indlela yokwenza
IHaram Masala Tea
Ukulungiselela ukusetyenziswa kwe-physics
Ungakhetha njani iimfesane zasebusika zomntwana?
Ukupheka kwekhaya - umkhowa omisa isobho